Ilaha macluumaadka la taageerayo (Bixiyeyaasha quudinta guryaha guryaha) - Blog Estate Blog - realtyWW:
Ilaha macluumaadka la taageero (bixiyeyaasha quudinta guryaha)
April 21, 2019 by dhabta ahWW, Wadarta aragtida:
Hadaad ubaahantahay inaad abuurto kayd macluumaad si aad ugu adeegato adeegyadeena signaarka ah markaa waxaad weydiin kartaa mid ka mid ah shirkadaha soo socda inay kuu abuuri karaan:
XML2U quudinta waxaa aqbalay xirmooyin dheeri ah, noocyo, xariiqyo, warbaahinta bulshada, barnaamijyada iyo aaladaha kale ee suuq geynta adduunka oo dhan marka loo eego quudinta kale. Helitaanka waqtiga lagu daro liiskaaga liiska aaladaha suuq geynta badan, ayaa noqotay dhibaato dhab ah.
Xalku waa xog ka timid XML2U. Hal feed ayaa ah waxa aad u baahan tahay oo dhan. Kaliya fiiri qaar ka mid ah 1000 + suuq geynta suuqgeynta waad quudin kartay.
Our RealBird Liistada adeegga Daabacaadda waxay qaadataa suuq geyn, iyo gaar ahaan qorista suuqgeynta iyo jiilka horseedda hal talaabo weyn oo horay looga soo qaaday teknolojiyada “caadiga ah”. Qalabkayagu wuxuu awood u siinayaa xirfadlayaasha guryaha guryaha inay helaan soo-gaadhista ugu badan ee liisaskooda tooska ah Liis gareynta liiska guryaha madal, bogag internet oo hanti gaar ah, liisaska astaamaha, suuqgeynta Facebook, suuqgeynta qoraalka qoraalka SMS iyo QR code ku saleysan madal mobilada iyo aaladaha isgaarsiinta iyo qalabka hogaaminta.
IDX Broker waxaa injineer u ah aruurinta, abaabulka iyo joogtaynta liistada MLS ee deegaankaaga, ayagoo kuu oggolaanaya inaad si aan kala sooc lahayn u soo bandhigto dhammaan guryaha MLS ee ku yaal goobta dhismahaaga. IDX (Isweydaarsiga Macluumaadka Internetka) waxay u oggolaaneysaa wakiilada iyo dillaaliinta inay galaan oo ay ku soo bandhigaan macluumaadka liis garaynta MLS websaydhyadooda guryaha. Sidoo kale loo yaqaan Broker Reciprocity, ereyga “IDX” waxaa loola jeedaa softiweerka, qawaaniinta iyo qawaaniinta u oggolaanaya xogta MLS inay ku muujiso bartaada. Quudinta xogtani waxay guud ahaan ka kooban tahay liistada xogta liiska guryaha lagu galay nidaamka MLS, halka xeerarka IDX ay go'aamin karaan halka, waxa, iyo sida loo soo bandhigo. Haddii MLS-kaaga ay ku siiso marin u helida quudinta xogtan, waad u adeegsan kartaa inaad ku kobciso liisaska oo dhan ee u qalmida boggaaga, maahan oo keliya liistada aad soo bandhigtay.
IndiaMLS waxaa loo sameeyay in lagu xoojiyo xirfadleyda guryaha kireeya isla markaana loo fududeeyo iskaashiga ku saabsan xiritaanka macaamillada guryaha iyadoo loo marayo aaladaha software-ka casriga ah. Marka aan sidaa yeelno, waxaan ka caawinnaa dillaaliyeyaasha / wakiilladu inay kordhiyaan wax qabadkooda shaqsiyadeed, hufnaantooda iyo awooddooda dakhli, iyo sidoo kale ilaalinta midba midka kale xuquuqdiisa.
Liisaska Hindiya waa Shirkad Adeegyada Liis garaynta Badan ku xira dhamaan wakiillada guryaha kireeya ee Hindiya. Waa rabitaankeena at Liisaska Hindiya si ay kuugu sahlanaato oo kuu fududaato inaad raadiso oo aad ka hesho guri dhisme ku yaal dhammaan Hindiya iyada oo loo marayo websaydhyada wakiillada guryaha kireeya. Liisaska Hindiya ayaa kaa caawin kara inaad hesho bixiyeyaal badan oo adeegyo looga baahan yahay macaamil ganacsiyeed. Liistooyinka Hindiya waxay ku yaalliin qaar ka mid ah magacyada ugu caansan uguna ixtiraamka badan ee guryaha dhismaha.
Mydatafeed.com . Miyaad tahay hay'ad guryaha oo ma leedahay guri quud ah oo aan la jaan qaadi karin gegooyinka guryaha ee aad jeceshahay inaad ku xayeysiiso? Waxaan qaadan karnaa quudintaada hada jirta, waxaan ku dhex mari karnaa Barnaamijkeena Quudinta Quudinta kadibna waxaan kuu soo diri karnaa quudinta aad ubaahantahay. Quudiyeyaasha ayaa laguugu soo diri doonaa qaab URL si aad ugu dirto portalsyada guryaha ku habboon.
DataExport u maareeyaan macluumaadka hantida dhowr shirkadood oo soo koraya; wakiilada guryaha, wakiilo guryaha kireeya, wakiilo shirkado waa weyn, shirkado kombiyuutar, boodhadh guryaha, joornaalada iyo naqshadeeyeyaasha app. Waxaan ku soo isticmaalnay sannado badan horumarinta iyo isku-darka barnaamijkeena iyo nidaamka quudinta tiro aan badneyn irridda guryaha, shirkadaha software-ka iyo websaydhada, fududaynta geedi socodka quudinta ee qof walba.
Quudiyeyaasha Wakaaladda guryaha waa adeeg waqtiga xayeysiinta ah oo loogu talagay hantida maguuraanka ah ee UK iyo iibka dibedda iyo wakiilo sii deynta. Waxaan bixinaa wax isbadal ah, qiime jaban, xalka loogu talo galay xirfadleyda guryaha raba inay ku xiraan akoontiga Rightmove, Primelocation, OnTheMarket iyo Zoopla waqtiga dhabta ah iyagoon maamulin goobahan gacanta ama si madax banaan. Waxaan kaa caawineynaa inaad ka takhalusto howlaha waqtiga qaadashada iyo maamulka soo noqnoqodka leh annagoo ku siineyno xal hal-hal ah oo kuu sahleysa inaad si fudud u maamusho oo aad u cusbooneysiiso faahfaahinta hantidaada hal meel, adoo si toos ah ugu daabacaya dhammaan adeegyada aad isticmaaleysid.
xmlCombined wuxuu isku daraa dhammaan dhinacyada daruuriga u ah maareynta hantida. Nidaamka Maareynta Maaddada (CMS) ee websaydhkaaga, Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM), XML wuxuu ku quudiyaa dhammaan dekedaha waaweyn, hantida lala wadaago wakiillada kale iyo soo dejinta guryaha. xmlCombined sidoo kale waxay bixisaa cusboonaysiinta waqtiga dhabta ah ee loogu talagalay portalsyada taageeraya oo ay ku jiraan Zoopla iyo Rightmove, iyagoo ku siinaya ikhtiyaarka inaad ku tusto guryahaaga cusub iyo wax ka bedelida isla markiiba xirmooyinka muhiimka ah.
Bixiyaha Qufulka ee Hantida waxaa si gaar ah loo sameeyay si looga caawiyo dhismeyaasha guryaha iyo wakiillada guryaha kireeya ee adduunka oo dhan inay suuqyadooda ka dhigaan illaa tobanaan milyan oo iibsadeyaal bartilmaameed ah si fudud oo kharash yar.
Reallyo.com Waxaannu nahay madax-bannaan sidaa darteed waxaan liis gareeyneynaa oo u suuq gelineynaa liisaskaaga kirada bogagga ugu weyn ee kirada leh hal dhag oo ay ku jiraan Apartments.com, Rent.com, Homes.com iyo kuwo kaloo badan. Shabakadayada isweydaarsiga waxay ka kooban tahay albaabbada kirada ee ugu weyn uguna booqashada badan khadka tooska ah.
QuantaTec waa shirkad ku taal London Design Design and Development oo fadhigeedu yahay London, waxaan ku takhasustay bixinta sadaqadeyn Horumarinta Websaydhka, Xallinta Software, Marti gelinta Websaydhka, emayllada ganacsiga, SEO iyo Adeegyada Suuqgeynta Internetka in la siiyo Wakiilada Estate, La taliyayaasha guryaha iyo Hay'adaha Kirada - oo dhammaantood ku hoos yaal hal saqaf!
Kireynta Isku-dhafka Websaydhadu waxay kuu sahlaysaa in lagu daro liiska hantidaada iyo waxqabadka raadinta websaydhkaaga. Habee u dhig mawduucyadaada si aad ugu dhigtid naqshadda boggaaga oo aad wax kasta ugu maamusho RentLinx.
RealShare. Si fudud u soo jiidashada kireystayaal badan & guri-iibiyeyaal! Ku soo biirkeena in ka badan 15,000 macaamiisha adeegsada nidaamka xayeysiinta ee RealShout si ay si fudud ugu xiriiraan kireystayaal badan iyo kuwa guryaha iibsada.
Xogta Prop waa shirkad suuq geyn oo dhijitaal ah oo si gaar ah diiradda u saareysa suuqgeynta guryaha ee internetka. Qaabkayagu waa in si joogto ah loo ogaado meesha iibsadahaaga, iibiyayaasha, milkiileyaasha iyo kiraystayaasha ay ka bilaabaan raadinta wakaaladda guryaha ama hantida internetka ka dibna waxaan ku siinnaa waxyaabo badan oo kala duwan oo ah soosaarayaal suuq-geyn oo dhijitaal ah iyo adeegyo kaa caawinaya inaad si wax ku ool ah u gaadho, u hawl gasho oo ugu dambeyn beddesho suuqa bartilmaameedkaagu kuu horseedo tayo sare. Nidaamka 'Prop Data' wuxuu awood kuu siinayaa inaad qabsato liistada hal mar ka dibna si otomaatig ah u abuurto muuqaalka ugu badan ee suuqa ee astaantaada guryaha iyo liistada iyada oo loo marayo websaydhkeena, nuxurka, mashiinka raadinta, emaylka, galka hantida iyo kanaallada suuq geynta warbaahinta bulshada.
dhabta ahWW April 21, 2019
Entry waxa loo posted in Ganacsiga Guri Guri iyo tagged Liis gareynta Syndication. Bookmark ah Permalink.
July 1, 2017 Liiska Liisaska Wada-hawlgalayaasha ee RealtyWW Macluumaadka - Shabakadda Xayeysiinta Iibka ee RealWide Si loo hubiyo in soo-gaadhista ugu badan ee liistadaada lagu dhejiyo websaydhka nidaamkayagu wuxuu si otomaatig ah ugu qaybiyaa isu-duwayaasha ugu sareeya adduunka iyo matoorada raadinta. Hoos waxaad ka heli kartaa liiska websaydhyadayada iskaashiga: Claz.org waa kayd macluumaad lagu kala soocayo. Ka dib biloyinkii 10 ee horumarinta iyo tijaabada beta ee Claz.org waxay hadda diyaar u tahay inay xakameyso farqiga u dhexeeya iibsadayaasha khaaska ah iyo xayeysiinta xayeysiiska iyagoo isu keenaya natiijooyin ka badan goobihii loo yaqaan "200", deegaanka […] Posted in Xayeysiinta guryaha
January 19, 2017 Iibinta Guri Iyada Oo Loogu Tala Galay Nidaamyada Warbaahinta Bulshadeed Inteena ugu badan waxaan ku biirnaa aaladaha warbaahinta bulshada sida Twitter, Facebook iyo Instagram si aan ula xiriirno asxaabta iyo kuwa aad jeceshahay. Warbaahinta bulshada ayaa markii hore loo isticmaali jiray dhajinta sawirrada, fiidyowyada iyo qoraallada qoraalka ah ee muujinaya waxa uu ahaa. Si kastaba ha noqotee, aaladaha warbaahinta bulshada ayaa aad u koray sannadihii la soo dhaafay waxaana hadda loo isticmaalaa kor u qaadista ganacsiyada iyo magacyada. Maanta, dadku waxay ka faa iideystaan ​​nidaamyadan si ay guryahooda u iibiyaan. Wakiillada guryaha kireeya ayaa sifiican uga faa iidaystay warbaahinta bulshada […] Posted in Xayeysiinta guryaha
February 4, 2019 Tilmaanta Kooban: Sameynta Degelkaaga Websaydhka Guul Siyaabo kala duwan ayaa loo adeegsan karaa in lagu suuqgeeyo websaydhka guryaha. Maqaalkani wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan siyaabaha loo suuqgeeyo websaydhka guryaha. Markaad leedahay degel internet, micnaheedu maahan inaad heli doontid macaamiil ku soo qulqulaya websaydhkaaga si aad u raadiso adeegyadaaga. Ka sokow haysashada degel, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad sameysay websaydh sidan oo kale ah booqdayaashu waxay u imaan doonaan kuna sii jiri doonaan goobta markay ka baaraandegayaan adeegyadaaga. Abuuritaanka boggag internet-ka oo loogu talagalay wax-iibsadeyaashu waxay u baahan yihiin […] Posted in Ganacsiga Guri Guri
February 6, 2017 Nidaamyada ugu fiican ee loo yaqaan '6 Plats Plats' ee loogu talagalay Ganacsatada Yaryar Mulkiileyaasha ganacsiyada yar yar maanta waxay leeyihiin waqti sahlan oo ay ku maareeyaan ganacsigooda sababtoo ah hormarinta teknolojiyadda. Xitaa baahiyahooda kala duwan, maaraynta iyo abaabulka ganacsi waa dhakhso badan oo hufan. Waxaa la heli karaa barnaamijyo ganacsi oo kala duwan, kuwaas oo ku habboonaan kara badeecada iyo miisaaniyadda milkiilayaasha ganacsiga. Inta aynaan sii socon, bal aynu marka hore caddayno waxa mulkiilaha ganacsigu u baahan karo. Markaad bilowdo inaad fiiriso aaladaha ganacsiga, waxaad la kulmi doontaa kuwan […] Posted in Ganacsiga Guri Guri
Waxaa laga yaabaa 29, 2017 5 Fikradaha Ganacsi ee Iibka ee Ugu Fiican iyo Fursadaha 2017 Dhismaha guryaha ayaa u muuqda inuu ka mid yahay warshadaha ugu waaweyn ee fursadaha ganacsi ay ka jiraan gees walba. Milkiileyaal badan oo ganacsato ah ayaa sheegay in ay jiraan habab badan oo macaash loo rogi karo. Tani waa shaqo dabacsanaan leh inaad lahaato maxaa yeelay waxaad dejin kartaa jadwalkaaga oo aad kalsooni ku qabi kartaa dakhligaaga kasbashada sanadka. Halkan waxaa ah 5 fikradaha ganacsi ee guryaha ugu fiican haddii aad rabto inaad ka dhex shaqeyso warshadan. 1. Wakiilka Guri Guri Shaqadaada waa inaad noqotaa mid wadahadalada udhaxeeya iibiyaasha iyo iibsadayaasha […] Posted in Ganacsiga Guri Guri
September 9, 2019 Sida ay Shirkaduhu uga faa iidayaan Adeegyada Injineerka Ganacsiga guryaha la iibsado waa mid si heer sare ah loo tartamo, dhismayaasha bixiya qiimo dheeri ahna waa kuwa ugu soo jiidashada badan ee kireystayaasha. Muuqashada hanti waa muhiim, laakiin waxqabadka qaab dhismeedka ayaa sidoo kale muhiim ah. Degganeyaal badan ayaa mudnaanta koowaad siiya dhinacyada sida iftiinka tayada leh, heerkulka gudaha, tamarta korantada, iyo difaaca dabka ee la isku halleyn karo. Shirkad injineer ayaa ka caawinaysa horumariyeyaasha hagaajinta dhinacyadan. Shirkad injineer aqoon leh ayaa sidoo kale kaa caawin kara koodhka dhismaha […] Posted in Ganacsiga Guri Guri
June 29, 2018 Caqabadaha Horyaalla Sicir-bararka Taasi waxaa xallin kara aaladda Qalabka iibka 'Dhowr iibka' Dhowr Suuqa iibku waa madal kor loogu qaadayo codsiyada ku saleysan daruuriga oo loo adeegsaday in lagu horumariyo barnaamijyo caan ah oo ganacsi caan ah. Bartan ayaa leh qalab fara badan oo ay ku deeqaan horumariyaasha. Ka mid ah aaladahaas, horumariyayaashu waxay dooran karaan Salesforce Dx oo loo tixgeliyo inay yihiin qalab horumarineed oo aan muuqanayn oo horumar leh. Qalabkani wuxuu la imanayaa astaamo badan oo gaar ah iyo faa'iidooyin kala duwan. Si loogu isticmaalo qalabkan habka saxda ah oo loo goosto faa'iidooyinkeeda oo dhan, waxaa muhiim ah in la ogaado kuwa yar […] Posted in Ganacsiga Guri Guri